Apple Music nhau: chiteshi chinovhara, zvakasarudzika playlists ... | Ndinobva mac
Apple Music nhau: chiteshi chinovhara, zvakasarudzika playlists ...
Ignatius Room | | apuro, Apple Music, Apple zvigadzirwa
Iyo Cupertino-based kambani inoramba ichishanda nesimba kuitira kuti vashandisi veApple Music vasarasikirwe nechero sarudzo dzavaimbove nadzo paSpotify. Muchokwadi, chimwe chezvinyorwa zvikuru izvo iOS 10 ichaunza kwatiri chichava kugadzirisazve kuzere kweApple Music application, asi nekuwedzera macOS Sierra ichauyawo inofambidzana neshanduro nyowani yeApple Music mune vhezheni itsva yeTunes. Kubva rinenge zuva rekutanga, vazhinji vanga vari vashandisi vakanyunyuta zvineshungu nezvezvakaoma iri pano neapo kutsvaga kana kuwana zvemukati zvaunofarira kuburikidza nechishandiswa. iOS 10 inoita kunge mhinduro yekambani kuzvichemo zvevashandisi vayo.
Kubva muna Chikumi wadarika, vazhinji ndevaya vakaisa beta yeIOS 10 uye vari kunakidzwa nezvose zvirimo, kusanganisira iyo nyowani Apple Music app. Asi kusvika mazuva mashoma apfuura, kambani haisati yatanga kumisikidza zvimwe zvezvinhu zvitsva zvinosvika nekuburitswa kweshanduro yekupedzisira.
Sezvo isu takakwanisa kuverenga muMacRumos, vamwe vashandisi vatotanga kunakidzwa nemamwe mavhavha matsva enhepfenyuro inowanikwa kuburikidza nebasa iri. Parizvino ivo havawanike munyika dzese, asi nekufamba kwenguva uye zvirokwazvo isati yatanga vhezheni yekupedzisira yeIOS 10, vanofanira kunge vatovepo.
Dzimwe nhau Iko kumisikidzwa kweshumiro yemimhanzi runyorwa rwakagadzirirwa isu. Aya mazita anogona kuwanikwa mune My New Music Mix chikamu. Iri basa rakafanana neiro rave riripo kwenguva yakareba paSpotify uye mune iro femu yeSweden inogadzira zvinyorwa zvemitambo maererano nezvatinoda. Imwe yeaya runyorwa ine makumi maviri neshanu nziyo uye ichave ichiwanikwa Chishanu yega yega muApple Music application.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Apple Music nhau: chiteshi chinovhara, zvakasarudzika playlists ...
Iyo iPhone 4 inopera mukutsigirwa kwehunyanzvi kubva munaGunyana 13
Apple inotangisa Apple Music makadhi echipo anopa mwedzi miviri yebasa